Cabdulahi Abokor siduu ku hantay xilka wasiirnimo.
Waxan dhegeystey war saxaafadeed uu jeediyey wasiir cabdulahi abokor, oo ah wasiirka gaadiidka iyo jidadka Somaliland.
Ninkaasi xukumadii hore ee siilaanyo wuxu ahaa wasiir xigeenka amniga .
Xafiis culus oo ammaanka wadanka u xil saaran ayuu masuul ka ahaa.
Xilkii ayaa laga qaaday kadibna maalmo ka dib xilka markuu waayey ayuu shir jaraaid qabtay, 27 may 2014.
Shirkaas jaraaid oo laga heli karo cajalaadaasina ku jirto Youtube ka wuxu cabdulahi ku sheegay, inuu xog ogaal yahay xafiis muhiim ahna fadhiyey waayahay hadalkiisii oo toos ah ayaan halkan idiinku soo guurinayaa ( wuxu yidhi xafiiskayga maalin walba report amniga wadanka ah ayaa ku soo dhici jirey, markii aan xukumada ka mid ahaa waxa jirtey koox ka tirsan golaha xukuumada (wasiirada) aanu intayada kale u niqiiney Guntigaab, kooxdaasi waxay xidhiidh la lahayd ikhwaanul muslimiin, ictisaam, islaax, damu jadiid, iyo Alshabaab.)
Hadalkan uu jeediyey cabdulahi abokor laba dembi oo cad ayaa ka muuqda.
1. Midi waa sumcad xumayn iyo shaambad argagixiso oo uu qaranka ku dhuftay.
2. Mida labaadna waa xilgudasho la,aan hadii uu oogaa kooxdan argagixiso ee subax kasta golaha la fadhidey sababta uu wax uga qaban waayey ee u soo xidh xidhi waayey ileen isagaa ahaa wasiirkii amniga qaranka qaabilsanaa aa la xidhay caddee ayaa la yidhi waxan aad sheegtay.
Sifaha lagu qabtay sax ma ahayn hadana waan sheegayaa waqtigaasna maan raacsanayn sababtoo si fudud waa loo qaban karayey Lakin wuxu sheegay isaga laftigiisu shirkii jaraaid ee shalay inuu 12 xabo oo rasaas ah gurigiisa ka ridey .
Mar hadii uu intaas inu riday qirtay itaalkiisa ayay ahayd lakin waa la qabtay waa nin dagaalamay isaguna itaalkiisa Hadaba 3 june 2014 muuse biixi oo shir jaraaid qabtay ayaa isna ka hadlay xahdiga cabdulahi abokor .
Muuse biixi oo xiligaa ahaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye isla markaana loolan murashaxnimada xisbiga ah ku jirey, wuxu yidhi
( Markii aan musharax ki dhawaaqay xukuumadu dagaal cir iyo dhul ah ayay qaaday dad baa la xidhay, dadka la xidhay waxa ka mid ah cabdulahi abokor xadhigaas waan cambaaraynayaa waa ka khalad.
Wasaarada arimaha gudaha iyo raga ammaanka qaabilsan waxan weydiinayaa ragii jabuuti qarxiyey hargeysa ayay ka tageen waa ceeb arinkaasi ha dooneen cida ka dambaysa iyo cidii wadeyba intaynu inagu isku wareegaysanayno.
Hadaba muuse biixi hadalkiisuna wuxu si badheedh ah ugu raacay cabdulahi in dalku argigixiso xidhiidh la leeyahy, sababtoo ah qaraxa jabuuti ee uu dhakada inaga saaray wuxu la xidhiidhiyey arinka cabdulahi .
Hadaba hadii aynu intaas isla fahanay an dib idiinku celiyo cabdilahi shirkiisa jaraaid ee shalay 7 may 2019.
Cabdulahi waxa muuqata hadalkan inay madaxweynaha isku waafaqsan yihiin sababtoo saddexda nin ee uu Cabdulahi soo hadal qaaday saddexduba waa raga ay siyaasada ku loolameen madaxweyne muuse .
Eedaha cabdulahi jeediyey qaarkood waa aflagaado, qqarkoodna waa been abuur, qaarkoodna majarahabaabin, qaarkoodna waa masabid, hadaba an kala qaadno.
Eedaha uu u jeediyey xuseen axmed Caydiid.
Xusen axmed caydiid wax iin ah ama eed ah wuu u waayey balse cay aan ahayn miligihii ragga lagu yiqiin ayuu ku ganay.
Cabdulahi wuxu yidhi xuseen axmed caydiid gurigiisa biyo lagama cabo.
Biyaha, milixda, dabka iyo hawlaha guriga dumar uun baa kala qaata cabdulahi hala weydiiyo xiliga uu guriga xusen caydiid biyaha weydiistey ee ku soo hungoobey.
Eedaha uu jeediyey ismacil yare .
Ciidanka ayuu lacag ka cunay ayuu yidhi waxaynu ka warqabnaa ismaaciil yare inuu ahaa wasiirkii ugu mudada dheeraa wasiirada arimaha gudaha soo maray sidoo kalena ahaa wasiirkii ugu adkaa xiliyadiisii amniga dalka iyo dhismaha ciidankuba .
SPU ayuu aas aasay eedahaasi waa masabid aan cabdulahi cadayn keenin lagu qanco.
Eedaha uu u jeediyey Hogaamiye xirsi cali xaaji xasan.
Xirsi wuxu yidhi gurigayga ayuu 700 oo xabo oo rasaas ah ku ridey ana 12 xabo ayaan ridey kadibna waa lay qabtay.
Hadii aynu tiisaba u raacno 700 marka laga jaro 12 waa 688 xabo ayay is dheer yihiin labadaba dhinacba way dagaalameen lakin itaalkooda ayaa sidan kala noqday.
Xirsi wuxu ahaa wasiirka madaxtooyada, qabashada cid la qabanayo eedeeda ma laha, wasiirka arimaha gudaha ma ahayn, taliyaha ciidanka ma ahayn taliyaha ciidanka degdega ahna ma ahayn ( rapidly rescue unit) RRU .
Waa eed aan sal lahayn ta labaad ninka golaha xukumada ku sheegay Alshabaab in la qabto sax ma ahayn cida la qabtey ee ahayd muuse biixi oo kale ayaaba ay ahayd in la qabto .
Wuxu sheegay in xirsi caruurtiisi hargeysa ka raray, waa arin qosol leh Xirsi caruur badan ayuu leeyahay 3 xaas ayuu leeyahay laba ka mid ah ayaa dalka jooga Hargeysa iyo Burco, hadii ay la tahay caruur waxbarasho tagtay in iyaga lagala baxsaday cabdulahi abokor iyo muuse biixi, bal kuwa jooga miyay soo weerari doonaan? Cabdulahi ha la weydiiyo.
Dagaalka kalshaale ee cabdulahi ku eedeyey xirsi .
Ninka arintaas xilka lagaga qaaday wuxu ahaa jidhif arintaasna wuu majara habaabiyey Cabdulahi.
Hadaba Cabdulahi abokor siduu xilka ku siiyey muuse biixi waa laba mid uun.
1. Mida hore waa ciilqab siyaasadeed oo labaduba ka midaysan yihiin, waa laba nin oo inay aarsadaan isu xulafaystay.
2. Mida labaadna Cabdulahi wuxu magansaday oo xilka keentay Eedadii oo ah xaaska muuse biixi, xiligii siilaanyona sidaas oo kale xaaskii siilaanyo oo iyana eedadiis ahayd ayaa ka saacidey inuu golaha ku biiro ee karti iyo aqoon midna laguma soo xulan.
Labadan tuduc oo gabay hore ah ayaan ku soo geba gebaynayaa.
Sado gacal nin waayaa martiya soorya gabadheede
Sarartii ciyiga loo baxshey baad selel ka qaadeen.
Bashiir Cumar Geele .
Golaha dhexe ee Xisbiga Wadani.